Qarixii Muqdisho oo mideeyay Soomaalida - BBC News Somali
Image caption Kooxda Gurmad252 oo ku sugan goobta qaraxa uu ka dhacay
Koox Dhalinyaro ah ayaa magaalada Muqdisho ka hirgaliyay xarun loogu talagalay in lagu caawiyo dadkii wax ku noqday qaraxii Soobe ka dhacay Sabtidii.
Qaraxaas oo ahaa midkii ugu xoogga badnaa ee ka dhaca Soomaaliya waxaa ku dhimatay ku dhowaad 300 oo qof.
Dhalintan oo kooxo u qaybasan ayaa diiwangalinaya dadka dadkoodu ka maqanyihiin, kuwa dhaawaca ah ee u baahan caafimaad dibadda ah iyo in la aqoonsado dadka ku dhintay qaraxii Muqdisho ka dhacay 14-kii bishan.
Dhallinyarada ayaa sidoo kale booqanaya meesha uu qaraxa ka dhacay ee isgoyska Soobe. Waxay isu qeybiyaan afar koox oo caafimaadka, gurmadka, diiwaangelinta iyo koox dhanka kumbuutarada kala shaqeyso.
Waxay qaar ka mid ah ku sugan yihiin goobta uu weerarka ka dhacay, waxayna raadinayaan haraaga maydad kale haddii laga heli karo goobta.
Image caption Dad badan oo ka qeybqaadanaya hawlaha gurmadka
Waxaa halkaas la'isugu geeyay dhalinyaro mutadhawiciin ah iyo saraakiil dowladeed oo ka shaqaynaya hawlaha gurmadka masiibadii ka dhacday isgoyska Soobe, maalintii sabtida ee ay taariikhda ku beegnayd 14-kii Oktoobar, 2017-ka.
Ma jirto masiibo xadkan la'eg oo markaliya dadka intaas la'eg ay ku dhinteen inta la xusuusanyahay taariikhda dhow ee Soomaaliya sida uu sheegay madaxa gaadiidka gargaarka degdega ah ee Muqdisho, Cabdiqaadir Cabdiraxmaan.
Image caption Qaar ka mid ah askarta dowladda oo ku sugan Soobe
Madaxweynayaasha dowlad goboleedyada oo todobaad ka hor shir ay Kismaayo ku qabteen ku dhaleeceeyay dowladda dhexe ayaa iyaguna cambaareeyay qaraxa, waxana ay ku baaqeen in meel looga soo wada jeedsado Al-shabaab, meelna la'iska dhigi siyaasadda la'isku hayo.
Image caption Meesha uu qaraxa ka dhacay
Inkasta oo dowladda ay samaysay dadaal aad u baaxad weyn illaa heer madaxdii ugu saraysay ay ka qeybqaadanayaan gurmadka, haddana qaraxa Soobe wuxuu banaanka soo dhigay dhaliisha weyn ee dowladda marka ay timaado in wax laga qabto masiibo heerkan la'eg ee qaraxyadu sababaan.